कस्तो थियो तानाशाह हिटलरको यौन जीवन ?
इतिहासका केही क्रूर तानाशाहहरूमध्ये हिटलरको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । हिटलरले युरोपमा तबाही मच्चाउँदै धेरै यहुदीहरूलाई मारेको कुरा त सबैलाई थाहा छ । तर हिटलरको यौनजीवनका बारेमा पढ्दा आश्चर्यचकित बनाउने तथ्य भेटिन्छन् ।
भतिजीसँग यौन सम्बन्ध
जर्मनीको नाजी पार्टीका सदस्य ओट्टो स्ट्रासरले हिटलर आफ्नी भतिजी अंगेला मारिया गेलीका साथ अवैध सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएका थिए । त्यसैगरी उसले भतिजीलाई आफूमाथि मुत्न पनि लगाउँथ्यो भनी उनले आरोप लगाए । सन् १९३१ मा गेलीले आत्महत्या गरेकाले योबारेमा सत्यतथ्य जान्न सकिएन । तर पछि हिटलरले आफ्नो पहिलो प्रेम गेली भएको बताएका थिए ।
जर्मन अभिनेत्री रेनाते मुलरका अनुसार सेक्स गर्दा हिटलरले अचम्मका हरकत देखाउँथ्यो । ऊ घुँडा टेकेर बस्थ्यो अनि मुलरलाई लातैलातले हिर्काउन लगाउँथ्यो । पछि सन् १९३७ मा मुलर झ्यालबाट लडेर मरिन् ।
संमलैंगिकविरोधीहरूका अनुसार हिटलर र उनका नाजी सेना समलैंगिक थिए । ‘द पिन्क स्वस्तिका’ र ‘द हिडन हिटलर’ जस्ता किताबहरूमा हिटलर समलैंगिक भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
रूढिवादी क्रािन्तकारी हर्मन राउस्निङले सन् १९३६ मा नाजी सेना छोड्ने बेलामा हिटलरमाथि बच्चाहरूको यौनशोषण गरेको आरोप लगाएका थिए । तर यसको पुष्टि कसैले गरेन ।
इतिहासकार एवं हिटलरका जीवनी लेखक इयान केर्शका अनुसार हिटलरले धेरै यौनकर्मीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको थियो । त्यसका अलावा ऊ अत्यन्तै सानी बच्चीहरूसँग पनि सेक्स गर्न चाहन्थ्यो । उनीहरूलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न सजिलो हुने उसको विश्वास थियो ।लाेकान्तरकाे सहयाेगमा
यी हुन् सेक्सका फाइदा
ट्रम्पकी श्रीमतीले किन ढाल्दैछिन् २ सय वर्ष पूरानो यो रुख ?
यी हुन् मानिसमा हुनुपर्ने ३२ लक्षण
किन उत्तर दिशामा शिरानी पारेर सुत्नु हुँदैन ? यस्ता छन् हिन्दु संस्कारहरु !
सेक्ससंग सम्बन्धित यस्ता घटनाहरू – जसले बिश्वलार्इनै अाश्चर्य र लाजमर्दाे बनायाे
महिलाहरुलाई हुरुक्कै पार्ने पुरुषका ११ गुणहरु
के तपाइलाई थाहा छ नङमा देखिएको ‘अर्ध चन्द्राकार’को अर्थ ?
अमेरिकी कम्पनीले चप्पलमा गान्धीको तस्बिर राखेपछि…
श्रीमानबिना एक्लै बजार गएको भन्दै महिलाको टाउको छिनालियो
मन्त्रीले सरुवा गरिदिने भन्दै महिलासँग यौन प्रस्ताव राखेपछि…
यो हो दुनियाकै सबैभन्दा महंगो तरकारी, किलोको ५० हजार रुपैयाँ